मुटुका विरामीको सहज उपचारका लागि हस्पिटलले क्याथल्याव सेवा सुरु - Saptakoshionline
मुटुका विरामीको सहज उपचारका लागि हस्पिटलले क्याथल्याव सेवा सुरु
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २७, २०७४ समय: ११:३७:३१
सन्तोष न्यौपाने झापा
झापा बिर्तामोडको बीएण्डसी शिक्षण हस्पिटलले मुटु रोगीको उपचारका लागि अत्याधुनिक किसिमको क्याथल्याव मेसिन भित्र्याएको छ । मुटुका विरामीको सहज उपचारका लागि हस्पिटलले क्याथल्याव सेवा सुरु गरेको हो । २८ करोड मूल्य बराबरको क्याथ ल्याब मेसिन भित्रिएको हस्पिटल प्रशासनले जनाएको छ ।
डीएम कार्डोलोजिष्ट डाक्टर राजेश पञ्जियारले मुटुको भल्व साँघुरिएको अवस्थामा पनि विरामीको उपचार सहजै सम्भव हुने बताए ।
अहिले धेरै मुटुका विरामी उपचारका लागि काठमाडौँ वार भारतीय सहरमा रहेका अस्पताल धाउने गर्छन् । अव उनीहरुले बीएण्डसीबाट स्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले जानकारी दिए ।
मुटुको उपचारका लागि डा. पञ्जियारको नेतृत्वमा पाँच जना विशेषज्ञ डाक्टर रहेका मुटु रोगको उपचारमा संलग्न डाक्टर पञ्जियारले बीएण्डसीमा मुटुको सम्पूर्ण उपचार सुरु भएको भन्दै अबको दुई वर्ष भित्र हस्पिटलले मुटु फेर्नेसम्मका उपचार गर्ने उद्धेश्यका साथ चिकित्सकको टोली लागेको बताउनु भयो एनजियो ग्राफिक्स, एजियो प्लाष्टि, प्रेस मेकर हाल्ने प्राविधिमार्फत विभिन्न उपचार गर्दै आएको हस्पिटलले क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालन गरेसँगै आफ्नो मुटु कतिको स्वास्थ्य छ भन्ने चेक जाँच गर्न सकिनेछ ।
विभिन्न रोगको सफल उपचार गर्दै आएको हस्पिटलले अत्याधुनिक उपकरण भित्र्यिाउने क्रम जारी रहेको बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईको भनाई छ । उहाँले मेची अञ्चलमा मुटु रोगको विशेषज्ञता हासिल गरेको एक मात्र डाक्टर बीएण्डसीमा रहेको दावी पनि गर्नुभयो । अत्याधुकि उपकरण सहितको उपचार सुरु भएपछि पूर्वका मुटु रोगीलाई ठूलो राहत मिलेको मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर पञ्जियारले जानकारी दिए ।
न्यूरो सर्जन डाक्टर पंकजराज नेपालले नशा च्यापिएको बिरामीको शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्न सकिने बताउनु भयो । नशा च्यापिएको अप्रेशन गर्दा प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने धेरैमा भ्रम रहेको तर नशाको सफल शल्यक्रिया गरेर उपचार गरेमा यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिने डा. नेपालले जानकारी दिए ।